Sekolim-panjakana 112 : ampianarana fananahana ara-pahasalamana ny mpianatra | NewsMada
Sekolim-panjakana 112 : ampianarana fananahana ara-pahasalamana ny mpianatra
Par Webmaster Two sur 24/03/2016
Ampidirina ao anatin’ny taranja science de la vie et de la terre (SVT) manomboka any amin’ny kilasy 8ème, ny fampianarana ny fananahana ara-pahasalamana. Iarahan’ny Marie Stopes Madagascar (MSI) sy ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny asa. Mivoatra isaky ny kilasy ny fahalalana omena ny mpianatra fa manomboka amin’ny fampahafantarana momba ny toe-batana sy ny fidirana amin’ny adolantsento. « Tanjona ny hisorohana ny fidirana amin’ny firaisana aloha loatra sy ny vohoka tsy nirina manimba ny hoavin’ny mpianatra », hoy ny tomponandraikitra voalohany ao amin’ny MSI, Razafinirinasoa Lalaina, omaly teny Anosy.Voalazan’ny fanadihadiana farany fa zazavavy iray amin’ny telo miteraka mialoha ny faha-18 taona avokoa ary miroborobo izany amin’izao fotoana izao noho ny antony maro.
Atao indroa miantoana ny fanentanana ka hisy mpanabe manokana avy amin’ny MSI Madagascar hiditra an-tsehatra any an-dakilasy hanazava ny fananahana ara-pahasalamana. Voalohany ho an’ny mpianatra amin’ny EPP, CEG sy lycée 112 manerana ny Nosy. Faharoa, natokana ho an’ny mpanabe satria hampita hafatra koa izy ireo ary tokony hahalala ny mahakasika ny fananahana ara-pahasalaman’ny tanora.
31%-n’ny ankizivavy, manao firaisana mialoha ny faha-15 taona
Amin’izao fotoana izao, mahatonga ny fanambadian’ny ankizy aloha loatra sy ny vohoka ny fiarahamonina sy ny kolontsaina ary ny ray aman-dreny. Noho izany, mila entanina ny tanora hitandrina ny fahasalamany sy hiharo ny tenany amin’ny aretina sy ny vohoka tsy nirina. Antony voalohany handaozan’ny ankizy ny fianarana ny vohoka. 31%-n’ny ankizivavy ary 22,3% -n’ny zazalahy manao firaisana mialoha ny faha-15 taona. Ho an’ireo tanora 15-19 taona efa manan-janaka, 52,7% tsy nandia fianarana, 31,2% nahavita ny ambaratonga voalohany ary 12,1% ny ambaratonga faharoa.
Hiasa manomboka amin’ny volana avrily ny mpanentana satria efa vita ny fandraisana azy ireo. Haharitra hatramin’ny 2020 ny fandaharanasa eny an-tsekoly, vonona ny sora-bola hampiasaina hatramin’ny taona 2017. Natao omaly ny fanaovan-tsonia ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta.